Aiza no tsy anaovana bisikileta 22? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Bisikileta isa 22 - Boky Torolàlana feno
Bisikileta isa 22 - Boky Torolàlana feno
Aiza no tsy anaovana bisikileta 22?
(Amponga) (mozika fandraisam-bahiny miala sasatra) - Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nanolotra anao marika marika bisikileta dimy izahay. Mpanamboatra madinidinika, mahaleo tena manao bisikileta tsy mampino noheverinay fa tokony ho fantatrao momba ireto, ireto misy marika enina hafa izay tokony ho fantatrao. (mozika fandraisam-bahiny miala sasatra) Ny bisikileta dia mety hitovy dika amin'i Kolombia amin'ny lafiny maro amin'izao fotoana izao.
Jereo fotsiny ny lampihazo amin'ny Grand Tour. Fa efa mba nisy ve ianao? Nieritreritra ny hividy môtô Kolombia? Ankehitriny, azonao atao ny misaotra ny bisikilety Scarab, nomena ny anaran'ny voangory scarab ary ny anaram-bosotra Escarabajo nomena ireo mpiorina tendrombohitra Kolombiana izay nanafika ny sehatry ny bisikileta eran-tany tamin'ny taona 1980. Scarab. miorina eo ivelan'ny Medellin dia misy veterans indostrialy fito izay nanapa-kevitra ny hanamboatra bisikileta izay mahafinaritra indrindra.
Araka ny antenainao amin'ny marika Kolombiana, Scarab dia mazava ho azy fa mamokatra bisikileta mihanika maivana ethe Letras, ary izy ireo koa dia manao bisikileta telo hafa misy hazakazaka mihazakazaka: ny Páramo, ny maodelin'izy ireo eny rehetra eny misy frein disc, sy ny Santa Rosa, a bisikileta feno hazakazaka am-pilalaovana miaraka amin'ny frein Disc sy ny Linear, bisikileta vita amin'ny hazakazaka nentin-drazana nampitolagaga. Vita tamin'ny vy izy rehetra ary vita tamin'ny sary hosodoko Kolombiana tena tsara sy miharihary, izay vokarin'i Scarab miaraka amin'ny mpanamboatra loko malaza any Amerika Latina. (mozika efitrano fandraisam-bahiny) alefa any amin'ny Repoblika Tseky ho an'ny orinasanay manaraka.
Mijery bisikileta Festka izahay. Festka dia natsangana tamin'ny taona 2010 tao Prague renivohitra. Nanomboka niara-niasa tamin'ny CompoTech tany am-boalohany i Festka, orinasa Czech izay manampahaizana manokana amin'ny fantsom-pitrandrahana karibonetra miolakolaka.
Ireo fantsona ireo dia manome ny kodiarana karbaona Festka ny endriny mahavariana rehefa tsy nolokoina izy ireo. Ny fandokoana azy ireo kosa dia azo antoka fa tena miavaka. Zahao ity Spectre tsara tarehy ity, ilay bisikileta hazakazaka henjana be avy any Festka.
Saingy tsy manao bisikileta fibre karbonika fotsiny i Festka. Izy ireo koa dia manana vy, titanium ary ny frame Doppler, izay vita amin'ny karbaona sy titanium, fa tsy manao azy io ho fomba mahazatra amin'ny fampifandraisana fantsona fibre karbonika miaraka amin'ny eyelet bitika, dia i Festka dia manana fantsom-bary titanium miaraka amin'ny eyelet bitika, misy manokana aza izy ireo kinovan'ny Dopplers dia natao tamin'ny alàlan'ny fantsom-boaloboka aliminioma avy teo amin'ny kapsily Nespresso 995 taloha. Ary toy ny hoe tsy dia nahazatra izany, dia nanao lavanty ny bisikileta mihitsy aza izy ireo mba hanangonana vola ho an'ny fikambanana mpiahy ny tanora ao an-toerana. (mozika fandraisam-bahiny miala sasatra) Ankehitriny any Etazonia mba hijerena bisikileta gravelona mahafinaritra be avy any Allied.
Niray tsikombakomba tamin'ny Alfa Allroad, fampifanarahana amin'ny bisikiletan'ny Alfa efa malaza azy ireo, niditra voalohany tamin'ny lalao vatokely izy ireo. Saingy tamin'ity fahavaratra ity dia natombok'izy ireo ny Able, izay bisikileta mijery adala raha ny marina. Mba hahazoana fahazoan-dàlana kodiarana bebe kokoa, ny Allied dia namindra ny rojom-pitaterana izay hitantsika matetika amin'ny bisikileta maoderina maoderina, fa tsy ny fanetsehana azy midina toy ny amin'ny 3T Explorer na Pinarello Gravel, ny Allied dia nanangana ny chainstay tamin'ny fomba lehibe, izay manome azy tokoa ny fijery miavaka mijery mangatsiatsiaka dia tsy tena midika hoe tsy mandeha ilay bisikileta.
Ary noporofoin'ny Allied fa niasa be ny bisikiletany rehefa nahazo ny fandresen'ny lehilahy sy ny vehivavy izy ireo tao amin'ny Dirty Kanza 2019. (mozika mangatsiatsiaka mampihena) Ahoana ny titanium tsara tarehy ho anao izao? Titanium dia tena ankafizin'ny mpanamboatra boutique, ary misy antony marim-pototra. Raha mila bisikileta maivana sy henjana ary ahazoana aina ianao, nefa tena haharitra mandritra ny androm-piainana, ny titanium no mety ho orinasa vaovao ho anao, ny No22 Bikes dia efa manao bisikileta titanium mahafinaritra indrindra any.
Topazo maso ity bisikileta an-dalambe Aurora mahavariana ity misy fantsom-piraketana vita amin'ny fantsom-boaloboka misy fantsom-boaloboka sy fipetrahan'ny seza ary apetaka amina logo anodized mahafinaritra. Ary raha tsy mety aminao ireo loko ireo, ny No22 dia manana karazana famaranana anodisedna misy. Ny Aurora no tampon'ny laharana No22 amin'ny hazakazaka bisikileta rehetra ary tafiditra ao anaty bisikileta valo hafa isan-karazany, toy ny bisikileta an-tendrombohitra, bisikileta ary hazakazaka vatokely tanteraka. (mozika miala sasatra funky) # 22 dia manana sary mahafinaritra, somary ambany, ary kanto.
Fa ahoana ny zavatra mafy kokoa? Bisikilety avy any avaratr'i Kalifornia ireo. Ny orinasa, raha ny teniny, dia nanomboka toy ny vondrona olon-dratsy cyclocross izay nanaparitaka bisikileta tao amin'ny garazan'izy ireo manokana. Ary notazonin'izy ireo izany fahatsapana tena tsara izany.
Nanao izany izy ireo tamin'ny fandokoana ny bisikiletany rehetra tamin'ny Spray. Loko fandefasana bisikileta. Manana safidy loko mahazatra tsy misy dikany toy ny safidin'ny kasety rovitra izy ireo.
Ary rehefa tsy misafidy izay asa loko tadiavinao ianao dia azonao atao ny mangataka amin'i Squid handoko ny bisikiletanao. Na izany aza, mandoko ny zavatra tadiaviny amin'ny loko hosodoko izy ireo. Ary mamporisika ny mpanjifany ihany koa handoko ny bisikiletany raha tiany ary alefaso fotsiny ho toy ny zana-kazo hosodoko amin'ny loko mangatsiaka, mamokatra hazakaza-tsoavaly mpihazakazaka mpihazakazaka ny ekipa mpifaninana aminy ary mifaninana sy mitaingina amboara eran'izao tontolo izao ny mpitaingina ny ekipany. (Mozika fitsaharana mangatsiatsiaka) Ankehitriny mizaha mijery ny Prova Cycle avy any Adelaide aseho miaraka amin'ity Speciale mampino ity.
Ny Speciale dia vy be fantsom-pifandraisana amin'ny karbaona. Mpanamboatra rindrambaiko maro no mividy fantsona fipetrahana karbonika, fa i Mark Hester avy any Prova kosa no manao ny fantson'ny seza. Saingy tsy izany.
Miaraka amin'ny Prova Speciale, ny fantsom-pifandraisana, ny trondro ary ny fivoahana dia 3D vita pirinty avy amin'ny vy ary i Hester no mamolavola ireo faritra ireo alohan'ny nanaovan'i RAM3D na RAMD, mpitarika indostrialy amin'ny famokarana aditif, ary raha izany dia mba omeo ity lahatsoratra ity ankihiben-tànana, ary fantatro fa mbola misy marika bizina maro any izay mbola tsy norakofantsika ka tiako ny Torohevitra sy tolo-kevitra etsy ambany omano ireo hevitra etsy ambany.
Misy bisikileta 22 santimetatra ve?
Ny rafitray diananaoao an-trano manontolo ao amin'ny toeram-pamokarana Johnstown, NY. Ny ekipa mpanao asa-tanana kelinay dia manana traikefa an-tsarimihetsika an-taonina anelanelan'ny 50 taona eo anelanelan'izy ireo, izay azo avy amin'ny sehatra rehetra aorinay.
Salama daholo ary miarahaba antsika hiverina amin'ny tendron'ny talata iray hafa izay hiresahanay ny habe na frame BMX na bisikileta hampiasaina amin'ny halavanao ato amin'ity lahatsoratra ity. Manana lahatsoratra iray hafa aho izay miresaka momba ny lafiny rehetra amin'ny géometry bikan'ny BMX. Ao amin'io fotsiny aho dia tsy manarona izay haben'ny endriny izay mety amin'ny haben'ny mpitaingina azy.
Izay no hifantohantsika anio miaraka amin'ny fifantohana amin'ny halavan'ny fantsona ambony, ilay lahatsoratra geometry hafa, mba hahitanao ny dikan'ireo tarehimarika hafa rehetra ary inona ny fiantraikany mety hitranga amin'ny fahatsapan'ny bisikiletanao, ianao izay miditra ao amin'ny BMX fotsiny na miverina aminy dia tonga, na olona te-hanana bisikileta vaovao na frame vaovao nefa tsy mbola mahalala izay habe tiany na izay habe tokony ho azon'izy ireo mifandraika amin'ny halavany mifandraika amin'ny halavany amin'ilay fantsona ambony ka andao hatomboka amin'ny haavo mitaingina efatra metatra enina santimetatra amin'ny halavany roa 18 metatra ary miakatra avy eo, fa aorian'io ao amin'ilay lahatsoratra dia hosaroniko ny haavon'ny mpitaingina izay fohy kokoa sy kely kokoa amin'ny haben'ny bisikileta. Araho hatrany na atsipazo raha ity no tadiavinao, dia andao atomboka amin'ny haavo mitaingina efatra ka hatramin'ny efatra metatra ary ny elanelana eto dia 18 ka hatramin'ny 20 sentimetatra eo amin'ny halavan'ny fantsona ambony ary mila miarahaba Kink aho amin'ny famoronana Ireto sary ireto taona maro lasa izay ary avy eo dia hitako izy ireo tato amin'ny BMX Union ary azoko ny hiresaka momba izany ka raha vaovao amin'ny BMX ianao ary eo amin'io haavo haavo io dia ity no refy sy haben'ny bisikileta tokony ho tadiavinao hampifanaraka anao amin'ny ankapobeny, avy eo dia mankany 1.20m ka hatramin'ny 1.50m izahay ary ny habeny dia misy halavan'ny tubes 19.5 'hatramin'ny 20.25' halavan'ny fantsona ambony, ka alohan'ny hiresahantsika ny bisikileta 18- Inch sy bisikileta 20 santimetatra dia miresaka momba ny 20 isika bisikileta santimetatra eto satria ny tadin'ny tubes ambony 19,5 santimetatra dia mety amin'ny bisikileta 20 santimetatra izay dimy metatra telo santimetatra ka hatramin'ny dimy metatra avy eo no mihetsika.
Eo no ahatongavanao amin'ny 20 santimetatra fisaka ho an'ny halavan'ny fantsona ambony hatramin'ny 20.5 santimetatra ho an'ny halavan'ny fantsona ambony ary raha mitady bisikileta BMX vaovao ianao dia matetika no mahita ny géometry ny frame farafaharatsiny halavan'ny fantsona ambony eo tranokalan'ny mpanamboatra bisikileta Ny fividianana bisikileta BMX vaovao satria ny haben'ny fantsona ambony dia mety hitondra fahasamihafana lehibe ho anao rehefa mianatra mitaingina fiara ianao, indrindra raha ampitahaina amin'ny zavatra fohy loatra sy kely loatra na zavatra lava loatra ary Lehibe loatra loatra ka tsy manana habe bisikileta mety dia manao izay hahamora kokoa ny asa, noho ny fandehanana manomboka amin'ny 1,5 tongotra enina ka hatramin'ny 1,70 tongotra sivy ny haben'ny fantsom-bokatra ambony indrindra dia 20,5 ka hatramin'ny 20.75 miaraka amin'ny halavan'ny fantsona ambony 20,6 ka hatramin'ny 21 sentimetatra, avy eo amin'ny 6 metatra miampy 20,75 ary maro hafa.
Miaraka amin'ity elanelam-potoana 5 11 ka hatramin'ny 6 metatra ity sy ny ambony, dia matetika aho no manolotra zavatra toy ny halavan'ny fantsom-batana 21-inch ambony, ary raha mitaingina azy ianao ary mahatsapa fa mila zavatra lava kokoa. Manoro hevitra anao aza aho handeha mihoatra an'io, indrindra raha manana enina metatra roa telo efatra dimy dimy sy enina miampy mpivoy mpitaingin-tsoavaly toa an'io halavany io ianao na maninona no misy frame BMX lehibe kokoa noho ny 21. dia santimetatra ary rehefa manakaiky ny 2m ianao dia mety mendrika ny handinihana bisikileta 22 'na 24', izay misy kodiarana lehibe kokoa ary mazàna tsara kokoa amin'ny olona lava kokoa Ho an'ireo zazalahy kely dia manana halavany roa metatra roa santimetatra ka hatramin'ny telo metatra izahay, avy eo ny halavan'ny fantsom-batana na ny haben'ny bisikileta tolo-kevitra momba ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo sy sasany santimetatra ary avy eo manana elanelam-potoana telo ka hatramin'ny telo metatra fito santimetatra izahay ary fahazoan-dàlana 14 ka hatramin'ny 14,5,5 inch, avy eo dia mifindra any amin'ny faritra mahazatra an'ny BMX, toy ny ary orinasa maro kokoa no manomboka eto amin'ny famokarana bisikileta feno na bisikileta feno BMX manokana.
Manana ny elanelam-potoana isika manomboka amin'ny 2 metatra 11 ka hatramin'ny 3 metatra 10 santimetatra amin'ny velarana feno ary ny halavan'ny fantsom-batana ambony eto dia 16 santimetatra fisaka hatramin'ny 16 sy sasany santimetatra, noho izany ao an-tsaina dia izay ihany no misy antsika mikasika ny filàna manarona ireo tolo-kevitra fa zavatra tiako ho azo antoka ny zavatra noresahiko teto ary antenaina fa mbola ao ny ankamaroanareo satria arakaraky ny itondranao ny BMX no hahalalanao bebe kokoa, dia vao mainka hitombo ny tetika hahafantaranao bebe kokoa anao hampivelatra ny fombanao sy hahalalanao izay tena tianao haleha ianao, hatrany amin'ny Dirt Street Park angamba tianao ny zava-drehetra, angamba tianao ny ampahany aminy, tsara daholo izany satria ny freestyle daholo, fa arakaraka ny itondranao azy no vao mainka ianao mianatra ianao, arakaraka ny ianaranao no hahafantarako azy manokana ary any no hahalalanao izay haben'ny fantsona ambony tianao sy izay lafiny hafa amin'ny haingon-tsarimihetsika BMX tianao momba ny bisikiletinao satria samy manana ny fitaomana ananany izy ireo, fa kosa ianao vao voalohany Mianara mitaingina dia tsy misy akony firy izy ireo satria mianatra ny fototra fotsiny ianao, mianatra mifehy ny bisikileta. Ka ny tena zava-dehibe dia ny fananana bisikileta mifanaraka aminao amin'ny habeny. Manantena aho fa hanampy an'io lahatsoratra io, saingy misy zavatra hafa azonao atao takalon'ny bisikiletanao na ny fanovana ny bisikiletanao izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahatsapan'ilay bisikileta fa ny fantsona ambony lava be misy tahony lava kokoa dia afaka maka tahaka, fa izay misy fiatraikany sy fiatraikany samy hafa amin'ny traikefa mitaingina satria ny taho lava koa dia misy fiatraikany amin'ny familiana ny bisikiletanao lahatsoratra iray momba ny géomètikan'ny tahiry BMX azonao jerena eto amin'ity zoron'ny efijery ity sy ny lafiny rehetra amin'izany dia ianaro fa fohy kokoa ny halavan'ny fantsom-batana ambony dia ampy mifanohitra amin'izany, ny fork malefaka iray dia hitondra ny wheelbase anao lavitra kokoa, ny fihenan'ny fantsom-pandrefesana lava kokoa misy fiantraikany amin'ny familiana ary manana lahatsoratra momba ny geometry fork aho izay miresaka momba izany, ho hitanao eo an-joro eto ihany.
Samy hafa ny 'tena sarotra'. Ankehitriny rehefa fantatrao izany rehetra izany, dia azonao atao ny mankanesa amin'ny lahatsoratra géomètre frame ary jereo ny dikan'ireo fandrefesana rehetra ireo ary afaka mianatra bebe kokoa momba ny fampivelarana ny fomba fanoratanao BMX ianao ary mamantatra izay tianao sy izay mety aminao. Raha io voalaza io dia manantena aho fa efa nianaranao zavatra teto.
Manantena aho fa manampy anao izany, ampahafantaro ahy amin'ny hevitra raha manampy anao izy ary antenaina fa raha vaovao ianao eto na mbola tsy tsindrio ny bokotra 'Misoratra anarana' raha mbola eo ianao, mahita anao rahampitso raha hijery lahatsoratra hafa
Ho an'iza ny bisikileta 24?
Fotoana fohy taorian'izay dia nambara fa UnitedBisikiletaCo. dia namoaka ny voalohany22? feno, ny KF22 2017 fenoBisikiletaary FitBisikiletaCo. dia niasa tamin'ny sonia Brian Foster22? feno. Ny sasany aminareo dia mety ho afaka mampifandray ireo teboka amin'ny S&M, Fit, Revenge ary United satria izy efatra dia mifamatotra akaiky.
Ny fitsipika ankapobe ho an'ny24?bisikiletadia ny mifanentana amin'ny ankizy 7 ka hatramin'ny 11 taona. Mety miovaova kely izany na dia miankina amin'nybisikiletaary ny zaza. Mpanamboatra maro amin'ity lisitra ity no mivarotra ny azybisikileta ho an'nyankizy 8 ka hatramin'ny 12 taona, ka alao antoka fa hijery ny tabilao fandrefesana manokanabisikiletaalohan'ny hividianana.
Ka dia nivezivezy tamin'ny angon-drakitra iray taonina izahay ary vonona izahay hitondra anao ny lisitra farany amin'ireo bisikileta an-dalambe folo nahomby indrindra tamin'ny taona 2016. Fa ahoana marina no nanaovanay an'izany, reko ianao manontany anao? Matetika izahay nampiasa matematika. Ary adala amin'ny matematika izahay, noho izany dia nangataka ny fanampian'ny manam-pahaizana momba ny matematika antsoina hoe Daffyd Thomas izahay ary niara-namolavola ny World Tour of Bikes.
Ny hazakazaka rehetra eran'izao tontolo izao sy ny dingana tsirairay dia nampidirina latabatra ary nomena isa. Na izany aza, miahiahy izahay fa maro aminareo, toa anay, no tsy voatery manaiky ny fanomezana isa amin'ny UCI World Tour. Ho faly ianao maheno fa nanoratra azy indray izahay.
Manana kajy sarotra be ihany koa izahay, izay midika fa amin'ny maha mpanamboatra bisikileta izay ekipa ekipa iray amin'ny World Tour fotsiny dia hahazo isa marobe ianao raha oharina amin'ny mpamokatra mpanohana ekipa telo. Satria rehefa manohana ekipa World Tour telo ianao dia mora kokoa ny fandresen'ny World Tour. Iray ihany ny fanitsiana kely, ny fahasamihafana teboka farany ambony dia dimy isaky ny hazakazaka, fa mbola zava-dehibe Dan.
lalan-drano any Hudson
Nisy ny fandresena an-tsehatra tao amin'ny Criterium du Dauphine sy ny Vuelta a Espana, saingy mazava ho azy fa ny fandresena lehibe dia ny fandresen'i Arnaud Demare tany Milan-San Remo tamin'ny volana martsa. Amin'ny ankapobeny, midika izany fa nahazo isa ampy ianao mba hampidirana anao mora foana amin'ny TopTen. Ny hitantsika fa mahaliana dia ny nandehanan'i Demare modely io, izay ilay kinova maivana ho an'ny Lapierre, mifanohitra amin'ny Aircode izay maodely haingana kokoa ho an'ny Sprinter amin'ny taratasy. - Eo amin'ny laharana fahasivy dia ny Ridley Helium SL misy isa 114 GCN.
Tamin'ny taon-dasa ny Helium SL dia naka ny laharana faha-10 ao amin'ny lisitr'ireo bisikileta nahomby indrindra, ka tamin'ity taona ity dia tafakatra toerana iray izany. Nandresy tamin'ny Tour of Poland izy tamin'ny ankapobeny, dingana tao amin'ny Grand Tours anisan'izany i Thomas De Gendt ao Mont Ventoux, na dia mety hadinon'ny olona aza ny fiheverana izay zavatra hafa nitranga tao Mont Ventoux tamin'io andro io. Mampalahelo fa ity no fotoana farany hahitantsika an'i Helium SL amin'ny World Tour, fa aza matahotra mandritra ny fotoana ela satria namorona Helium vaovao sy mora kokoa i Ridley ary hiseho amin'ny taona 2017.- Angamba SSL.- Eo amin'ny toerana valo, miaraka amin'ny isa 136 GCN, dia ny Scott Addict, bisikileta volom-borona iray hafa izay mila fanavaozana tsy ho ela rehefa natomboka tamin'ny fahavaratry ny 2013.
Saingy tsy mahagaga raha tafiditra tao anatin'ny folo voalohany izy, raha jerena ny zava-bitan'ny Esteban Chaves sasany, izay nahazo fandresena marobe tamin'ity taona ity ary iza no mahalala izay mety hitranga raha mitazona ilay akanjo mavokely izy amin'ny faran'ny Giro d'Italia - Eny - Ny isa fito dia ny Cervelo S5 misy isa 150GCN. Ankehitriny ity bisikileta ity dia nanana andiana valiny mahavariana tamin'ity taona ity. Mark Cavendish dia nitaingina dingana efatra tao amin'ny Tour de France, nahazo fandresena iray i Stephen Cummings, ary zavatra iray hafa izay miresaka momba ity bisikileta ity dia ny nanjanonan'ny Cervelos ireo mpitaingin-tsoavaly tamin'ny hazavana R5 isaky ny hazakazaka rehetra afa-tsy i Paris- Roubaix ka iray ihany no azon'izy ireo Safidy, ny aerodynamic S5.
Midika izany fa ny fandresena 10 rehetra tamin'ity vanim-potoana ity dia tamin'ity bisikileta ity. Holazaiko aminao zavatra iray, Dan, farafaharatsiny nilazako fa nanao tsara kokoa tamin'ny bisikileta World Tour GCN ity bisikileta ity noho ny ekipa tamin'ny UCI World Tour. Heveriko fa izany dia mampiseho fa mety kokoa ny antsika. - Azo antoka. - Eo amin'ny laharana fahenina, misy isa 171 GCN, dia ny Venge Vias manokana.
Ka ny bisikileta aero faharoa amin'ny folo voalohany, aorian'ny Cervelo S5. Ity dia môtô tena mandeha manokana izay midika fa tsy dia ampiasaina firy amin'ny ankamaroan'ny bisikileta hafa amin'ny World Tour. Saingy mbola nahitana taona nahomby tokoa, anisan'izany ny dingana marobe amin'ny Grand Tour tarihin'ny tian'i Peter Sagan sy Marcel Kittel.
Heveriko fa ara-drariny ny milaza fa noraisin'ny mpomba miadana tsimoramora io rehefa navotsotra, saingy sarotra izao ny manakana azy ireo - isa dimy, ny ekipa BMC Team MachineMC SLR01 manana isa 198. Ankehitriny, miaraka amina ekipa iray monja amin'ny World Tour, dia zava-bita tsara ao amin'ny BMC. Indrindra rehefa heverinao fa ny iray amin'ireo mpamily azy ireo indrindra, Richie Porte, dia nandresy tamin'ny hazakazaka World Tour iray tamin'ity taona ity.
Ny ambiny dia miankina amin'ny zava-bitan'ny Greg Van Avermaet iray manontolo amin'ny Tirreno-Adriatico, Montreal GP ary mazava ho azy fa fandresena an-tsehatra tao amin'ny Tour de France - taona matanjaka sy tsy miova ho azy ireo izany - eo akaikin'ny lampihazo, ao amin'ny toerana fahefatra, ny Canyon Ultimate CF SLX misy isa 366 dia fitsambikinana goavambe 168 noho ny BMC Team Machine. Mazava ho azy fa ity bisikileta ity dia nahazo Grand Tour tamin'ny endrika Vuelta ary koa ny dingana Grand Tour tamin'ity taona ity, ary tsy misy isalasalana fa taona tsara nanohana an'i Mobistar sy i Katusha ity. Ary ny mahavariana, raha miroboka lalindalina kokoa amin'ny valiny isika dia hitantsika fa nahazo ambaratonga an-tendrombohitra bebe kokoa izy tamin'ity taona ity noho ny bisikileta hafa.
Marina izany, raha maka ny dingana sarotra indrindra amin'ny 2016 ianao dia hahita ny CanyonUltimate CF SLX ho Climbing Bike an'ny taona - statistika tsara izany, sa tsy izany? - misaotra, vady - aza hazavao ny zava-bitanao, saingy statistika tsara izy io. - Amin'ny laharana fahatelo sy fahefatra amin'ny lisitra tamin'ny taon-dasa, ampahany noho ny fahazoana ny iray amin'ireo loka lehibe indrindra amin'ny bisikileta matihanina, Paris-Roubaix, mazava ho azy fa ny Scott Folie. Ankehitriny koa dia miady amin'ny vidin'ny bisikileta marobe indrindra izy rehefa avy notapahin'i Mat Hayman teo amin'ny arofan-vatolampy.
Saingy nilalao ihany koa izy toa an-dry Caleb Ewan sy Oliver Naesen avy any Orica sy IAM Cycling, hatrany Dan, teny an-dalana, manao azy ho bisikileta mahomby indrindra amin'ny hazakazaka iray andro.- Oh, zava-misy marina.- Eny, vady, marina miverina miaraka amin'ny zava-misy.- Ny laharana faharoa, toerana faharoa ary toerana iray hatramin'ny 2015 dia ny Pinarello Dogma F8.
Wout Poels sy Michal Kwiatkowski dia samy nahazo fandresena lehibe tokoa. Toy ny Foil talohan'io, bisikileta aero tena marobe ity. Amin'ny laharana voalohany, ny bisikileta tsara indrindra tamin'ny 2016 dia ny Tarmac manokana.
Marina izany, tamin'ny taona faharoa nihazakazahana, ny bisikileta maivana avy any Big S dia manjaka ny lisitray miaraka amina isa 661 GCN mahafinaritra. Enina heny mihoatra ny enina heny noho ny bisikileta faha-10 be mpividy indrindra. Mety tsy dia hahagaga loatra izany rehefa mieritreritra ianao fa ny olona toa an-dry Peter Sagan, Alberto Contador ary Vincenzo Nibali dia samy mampiasa ity bisikileta ity ary raha atambatra dia mahavariana tokoa ny Palmares-ny.
Na dia tsy aerodynamika na bisikileta maivana indrindra aza izy io, na dia miaraka amina singa World Tour-grade aza dia akaiky azy io, na tsia eto ambany, ny fetran'ny lanjan'izao tontolo izao, mangataka fotsiny ny fanontaniana, Dan, angamba ny aerodynamika sy ny lanja maivana fotsiny no zavatra Mandresy ny hazakazaka bisikileta - O, teniko. Fanontaniana inona izany.- Eny.- Eny, tsy hieritreritra an'izany ela isika, satria manana fanontaniana iray mirehitra iray hafa tokony horesahina.
Marika sasany, heveriko fa ny BMC sy Pinarello dia tsy manana modely tokana ho an'ny mpitaingina azy ireo azon'izy ireo ampiasaina amin'ny faritra rehetra mandritra ny vanim-potoana, izay midika fa ny fandresena rehetra dia hifantoka tanteraka amin'ilay maodely iray manokana. Raha marika hafa, toy ny Specialised sy Giant, no manolotra ny mpitaingina azy ireo modely telo hisafidianana karazana tany samihafa, dia mihanaka kokoa ny fandreseny. Ary izany dia mametraka ny fanontaniana hoe iza no mpanamboatra bisikileta nahomby indrindra tamin'ny 2016? Izahay koa manana ny vokany.
Amin'ny toerana fahadimy dia ny BMC - ny toerana fahefatra dia mankany Canyon - ny toerana fahatelo dia any Pinarello - ny toerana faharoa dia i Scott - ary tsy nahagaga, tamin'ny voalohany satria manana ny Venge Vias amin'ny isa fahenina izy ireo ary manana ny asfalta amin'ny laharana voalohany, izany Mazava ho azy fa manokana. - Andao handeha. Manana statistika sy angona be dia be kokoa izahay hampisehoana aminao fa nieritreritra izahay fa raha manontany momba izany ianao amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany, dia hiditra lalina kokoa amin'ny zavatra amin'ny lahatsoratra mivantana izahay.
Ary angamba mahazo endrika avy amin'ilay genius matematika ao an-toerana aza isika tsara, ampiasaiko malalaka io teny hoe 'genius' io.
Mety ho toa mahira-tsaina fotsiny izany amin'ny fiheverana fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny tonta-bisikileta taloha izy fa fantatrao - heveriko fa mila ampidirintsika izy hanazava, raha milaza ny marina tanteraka aho - Eny, ny algorithm tsy sarotra dia mety tsy ilay voantsinapy. ny sasany aminareo - tsia. Tianay ny maheno ny eritreritrao momba izany koa. Mifanaraka amin'ny folo voalohany aminay ve ianao? Inona no bisikileta tianao indrindra tamin'ny 2016, na dia tsy iray amin'ireo fahombiazana indrindra aza izany.
Avelao amin'ireo hevitra etsy ambany ny eritreritrao - Eny. Hamarino tsara ihany koa ny hisoratra anarana amin'ny GCN, raha toa ianao ka eo amin'ny toerana mety indrindra amin'ny vanim-potoana 2017, izay tena horesahinay amin'ny fomba rehetra atsy ho atsy - eny. Manana lahatsoratra vitsivitsy hafa izahay aorian'ny anaovanao izany.
Kely loatra ve ny bisikileta 24-inch?
Ny vehivavy manana haavo 5.4 sy ambany dia afaka mitaingina a24-bisikileta santimetatra. Izy io dia satria ny haavony dia haavo mety tsara handraisana ny halavan'ny tongotr'izy ireo ary ho azo antoka fa ho mora ny mivily. Midika koa izany fa mila mahazo abisikileta kely kokoamiaraka amina fefy lehibe.
Iza amin'ireo marika bisikileta no azo atokisana indrindra?
Amin'ny ankapobeny, Japoneymarikadia nyazo antoka indrindrafarafaharatsiny raha ny momba ireo tompona moto natao tamin'ilay fanadihadiana. Yamaha, Suzuki, Honda ary Kawasaki no manana ny laharana farany ambany indrindra, latsaky ny 16%. Amin'ny lafiny iray hafa kosa i Triumph, Ducati, BMW ary Can-Am.
Inona ilay moto tsy azo atokisana indrindra?
Tamin'ny fanadihadiana tamin'ny taona 2016 momba nytsy azo atokisana indrindraorinasan-tsolika motera, naseho toy ny. Can- am - 60% tsy fahombiazana BMW - 42% tsy fahombiazana Ducati --- 36% tsy fahombiazana Fandresena --- 28% tsy fahombiazana Harley - 22% tsy fahombiazana.27.06.2017
Tsara kokoa noho ny Yamaha i Honda?
nyHondadia karazana moto voadio kokoa ary mahazo aina kokoa amin'ny hafainganam-pandeha ambanyYamahamirona amin'ny firazanana hazakazaka kely kokoa amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa. Samy môtô tena tsara izy roa ary mitazona ny vidiny eo amin'ny tsena ankehitriny.
Inona ilay moto tsy dia fahita firy?
Hita tao ambadiky ny rindrin'ny biriky tao amin'ny trano fonenan'ny Chicago tamin'ny 1967, ny Traub dia hita nandritra ny fanavaozana ny trano. Hatreto dia mijanona ho mistery hatrany ny niavian'ny masinina. Ny mpanao azy, sy ny tantarany dia mety tsy ho fantatra mihitsy, ka mahatonga ny Traub ho iray amin'ireomoto tsy fahita firyeto amin'izao tontolo izao.
Fa maninona ny motera bisikileta no tsara indrindra?
Milina tsara kokoaary azo itokisana kokoaHonda bisikileta tsara kokoaraha oharina amin'ny hafabisikileta..Ny an'i HondaNy tanjaka dia ny tanjaky ny asa mafy sy ny injenieran'ny vokatra. Raha commuterMotorcycleny teknolojia dia tsy science science, mbola teknolojia ary azo hatsaraina.
Karazana bisikileta inona ilay No 22?
Ny Reactor dia natao ho lalana farany miorina amin'ny hazakazaka indrindra amin'ny laharana faha-22. Miaraka amin'ny fanamafisana ny hamafiny, ny fikirakirana mamaly ary ny lanjany maivana, ny Reactor no fitaovana hazakazaka fizarana titanium tonga lafatra. Manodidina ny hatsaran'ny lalana. Hazakazaka mahazaka, miaraka amin'ny fiononana sy ny géometry natao ho an'ny andro lava sy haingana ao amin'ny lasely.
Aiza no anaovana bisikileta titanium No.22 Company?
Ny laharana faha-22 dia miezaka mamorona fisainana mialoha, manasongadina ny frame titanium manankarena izay zakain'ny lova iainana. Ny rafitray dia natao an-trano avokoa ao amin'ny trano famokarana Johnstown, NY. Ny ekipa mpanao asa-tanana kelinay dia manana traikefa an-tsarimihetsika an-taonina anelanelan'ny 50 taona eo anelanelan'izy ireo, izay azo avy amin'ny sehatra rehetra aorinay.
Aiza no tsy anaovany sarina bisikileta 22?
Ny laharana faha-22 dia miezaka mamorona fisainana mialoha, manasongadina ny frame titanium manankarena izay zakain'ny lova iainana. Ny rafitray dia natao an-trano avokoa ao amin'ny trano famokarana Johnstown, NY.